Pannzagar: July 2008
RFA မှ ပြန်လည်ဖေါ်ပြပါသည်။ ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း ဒ...
သမ္မတဘုရှ် ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာ့အရေးလှု...
မုန်တိုင်းမှ နိုးထခြင်း ကာတွန်းပြပွဲ
Cooperate with UN or face more pressure: US called...
မြန်မာနိုင်ငံအရေး ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီ သဘောထားကွဲေ...
‘Group of Friends’ meeting on Myanmar
ဖွဲ့စည်းပုံသစ်ကို လက်မခံဖို့ ကုလသမဂ္ဂကို မြန်မာလွှတ်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်လွတ်နိုင်သည့်အဆို နားလည်မှု ...
Aung San Suu Kyi could be freed from house arrest ...
Historic Speeches of Bogyoke Aung San
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ (၆၁) နှစ်မြောက် အာဇ...
Soldier, You're Not Hated But Pitied
O' Child Beside the Waterfall
To Father Thakhin Aung San
Bomb Blast on Burmese Bus
ASEAN Ready to Increase Cooperation with the UN Sy...
NLD, what? where?
Turn the tables on Junta
RFA မှ ပြန်လည်ဖေါ်ပြပါသည်။
ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေစဉ် နေအိမ်မှာ အဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ဟာသသ႟ုပ်ဆောင် ဇာဂနာလိုႛ လူသိမဵားတဲ့ ကိုသူရကို ဇူလိုင် ၃၀ရက်နေ့ နေႛလယ် ၂ နာရီခန်ႛက ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်း ခ႟ိုင်တရား႟ုံး အင်းစိန်ထောင် သီးသန်ႛ႟ုံးမှာ ႟ုံးတင်စစ်ဆေးတယ်လိုႛ အင်းစိန်ထောင်မှာ အမှုစစ်ဆေးနေတဲ့ ဥပဒေ အကဵိုးဆောင်တွေက RFAကို ပြောပြပၝတယ်။
ကိုဇာဂနာနဲႛအတူ အယ်ဒီတာ ကိုဇော်သက်ထွေးနဲႛ တခြားနှစ်ဦးလည်း ပၝတယ်လိုႛ ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်း ခ႟ိုင်တရား႟ုံးကို ဇူလိုင် ၃၀ရက် ဒီကနေႛမှာ အမှုလိုက်ပၝခဲ့တဲ့ အမဵိုးသမီးရှေ့နေတဦးက ပြောပြပၝတယ်။ သူတိုႛကို တင်ထားတဲ့ စွဲချက်တွေထဲမှာ ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ဆူပူမှုဖြစ်အောင်ဖန်တီးတာကို တားမြစ်တဲ့ ပုဒ်မလည်း ပၝတယ်လိုႛလည်း သိရပၝတယ်။
သူတိုႛအမှုကို နောက်လာမဲ့ သြဂုတ် ၇ ရက်နေႛမှာ ထပ်ပြီး စစ်ဆေးဖိုႛ ႟ုံးခဵိန်းထားတယ်လိုႛလည်း သ်ိရပၝတယ်။
ဒီလို တရား႟ုံးတင်တာကို ကိုဇာဂနာနဲႛ ကိုဇော်သက်ထွေးတိုႛရဲ့ မိသားစုကို အာဏာပိုင်တွေက အကြောင်းကြားတာမရှိသလို ဒီသတင်းနဲႛပတ်သက်လိုႛလည်း လုံးဝ မသိရဘူးလိုႛ မိသားစုဝင်တွေက ပြောပၝတယ်။
ကိုဇာဂနာရဲ့ မိသားစုတဦး။ ။“ဘာမှအကြောင်းမကြားသေးဘူး၊ ကျွန်မတိုႛ အိမ်တွေကို။ ပုံမှန်ဆိုရင် အိမ်ကိုပဲ အကြောင်းကြားရတယ်။ အရင်တုန်းက ကျွန်မတိုႛ အတွေႚအကြုံအရတော့ အိမ်ကို အကြောင်းကြားတော့မှ ကျွန်မတိုႛက သွားပြီး အဲဒီဟာအတွက် နည်းနည်း သွားပြီး တွေႚဖိုႛ ဘာဖိုႛအတွက် ထောင်ဘူးဝမှာ သတင်းသွားပိုႛ ဘာညာ သွားလုပ်ရတယ်။ ”
ကိုဇာဂနာရဲ့ မိသားစုဝင်တဦး ပြောသွားတာပၝ။ အခုလိုမဵိုးထိန်းသိမ်းခဵုပ်နှောင်ထားတာဟာ တည်ဆဲဥပဒေနဲႛမညီညွတ်တဲ့အကြောင်း ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှာ အခြေစိုက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရှေႚနေမဵားကောင်စီ အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ထူးက ပြောပၝတယ်။
ဦးအောင်ထူး။ ။ “ကျွန်တော်တိုႛ နားလည်တာကတော့ အခု ကိုဇာဂနာတိုႛကို ဖမ်းတဲ့ကိစ္စဟာ ဝန်ကြီးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ မသင်္ကာလိုႛဆိုတဲ့ ပုံစံနဲႛ ၁၉၇၅ နိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက်ဖဵက်ဆီး ရန်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်သည့်ဥပဒေအရ ဖမ်းတာမဵိုးမဟုတ်ဖူး။ ႟ိုး႟ိုး ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ဖမ်းတယ်လိုႛ ကျွန်တော်တိုႛ နားလည်တယ်။”
“အဲဒီလို ဖမ်းတယ်ဆိုရင် အဓိက ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ ကာယကံရှင်ကို ဖမ်းတဲ့ အခဵိန်ကတည်းကစပြီး ဘာကြောင့်ဖမ်းတယ်ဆိုတာ အကြောင်းကို ရှင်းပြရမယ်၊ တရား႟ုံးကို တင်ပြီးတော့ ခဵုပ်ခွင့်ရမန် တောင်းရမယ်၊ မိသားစုနဲႛ တွေ့ခွင့်ပေးရမယ်၊ ပြင်ပကမႝာနဲႛ ဆက်ဆံခွင့်ပေးရမယ်၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကဵင့်ထုံးဥပဒေနဲႛအညီ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၁၅ရက် သိုႛမဟုတ် ရက် ၃၀ ကာလအတွင်းမှာ ႟ုံးတင်ရမယ်၊ မတင်နိုင်ရင် လွှတ်ရမယ်။”
“ဆိုတော့၊ အခု ကိုဇာဂနာတိုႛအမှုမှာ ဒီလို ဆောင်႟ွက်ခြင်းမရှိပဲနဲႛ ထားတဲ့ကိစ္စက အခု တည်ဆဲဥပဒေကို လုံးဝ ခဵိုးဖောက်တာ ဖြစ်တယ်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံကို ဆန်ႛကဵင်တာ ဖြစ်တယ်လိုႛ ကျွန်တော်တိုႛ ပြောခဵင်ပၝတယ်။”
မေလဆန်းက ရန်ကုန်နဲႛ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေၞဒေသတွေကို တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်သူတွေကို ကယ်ဆယ်ကူညီရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ကိုဇာဂနာနဲႛ ကိုဇော်သက်ထွေးတိုႛဟာ အင်တိုက်အားတိုက်ဆောင်႟ွက်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပၝတယ်။
ကိုဇာဂနာကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၄ ရက်က နေအိမ်ကနေ အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကိုဇော်သက်ထွေးကိုတော့ ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေႛက ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပၝတယ်။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် forward လုပ်ထားတဲ့ ကာတွန်းပုံလေးတွေပါ။ တကယ်လို့သာ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ Engineer ပညာရပ်သာ ထွန်းကားမလာခဲ့ဘူးဆိုရင်၊ Engineer တွေမရှိခဲ့ရင် ဆိုတာလေးကို ဟာသနှောထားတဲ့ ကာတွန်းလေးတွေပါ။ ပြုံးရယ်နိုင်ကြပါစေ။
Cartoon and Graphic | comments (4)
VOA News မှ ပြန်လည်ဖေါ်ပြပါသည်။
လာမယ့် ဇန်န၀ါရီလကျရင် သမ္မတ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ ဂျော့ဒဗလျူဘုရှ် သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ် သမ္မတ ခရီးစဉ်အဖြစ်နဲ့ အာရှနိုင်ငံ တွေကို သွားရောက်ဖို့ရှိပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံကို အရင်ဆုံး သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူတချို့နဲ့ တွေ့ဆုံကောင်း တွေ့ဆုံနိုင်တယ်လို့ ဘန်ကောက်ကလာတဲ့ သတင်းတချို့ကို ကိုးကားပြီး ၂၈ ရက်နေ့ထုတ် မဇ္စျိမသတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၆ ရက်နဲ့ ၇ ရက်နေ့တွေမှာ သွားရောက်မယ့် အမေရိကန်သမ္မတရဲ့ ထိုင်း နိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရ်ှလည်း သူနဲ့အတူ လိုက်ပါမှာဖြစ်ပါ တယ်။ သမ္မတနဲ့ သမ္မတကတော် နှစ်ဦးစလုံးတို့ဟာ မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ တက်တက်ကြွကြွ ပြောဆို ဆွေးနွေးလေ့ရှိကြသူတွေပါ။ အခုလည်း သူတို့ရဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူတချို့နဲ့ တွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်တယ် ဆိုတဲ့သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေတာပါ။ သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်ကတော့ သမ္မတရဲ့ ခရီးစဉ် အသေးစိတ် အပြီးသတ် မဆွဲရသေးတာကြောင့် ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ အတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့အကြောင်း ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။
သမ္မတဘုရ်ှအနေနဲ့ မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ တွေ့မယ့်မတွေ့ဘူးဆိုတာ မသေချာပေမယ့် သမ္မတဘုရ်ှအနေနဲ့ မြန်မာ့အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်တုန်း မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ တိုက်တွန်းပြောကြားတာမျိုးတွေတော့ လုပ်နိုင်တယ်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့ US Campaign for Burma အဖွဲ့ရဲ့ မူဝါဒရေးရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ဒင်က အခုလို သုံးသပ်ပါတယ်။
“သမ္မတဘုရ်ှက ထိုင်းမှာ နှစ်ရက်ထဲခင်ဗျ။ ဆိုတော့ ဒီနှစ်ရက်အတွင်းမှာ သူ့ အနေနဲ့ ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်၊ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ တွေ့ဆုံမယ်၊ တခြားအစည်းအဝေးတွေ တက်မယ်ပေါ့နော်။ သူ့ရဲ့ Schedule (ခရီးအစီအစဉ်) က ကျနော်တို့ သိသလောက်ဆိုရင် တော်တော်ကြီးကို ကျပ်ပါတယ်။
“အဲဒီတော့ သမ္မတအနေနဲ့ ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ မြန်မာအတိုက်အခံတွေကို တွေ့ ဆုံဖို့ ဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင်ဆိုတာ ကျနော် မသေချာပါဘူး။ ကြိုးစားမယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး သူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကို စေလွှတ်ပြီးတော့ တွေ့ခိုင်း တာလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
“အလားတူပဲ ကျနော်တို့သိသလောက် First Lady အနေနဲ့လည်း မဲဆောက်ကို သွားပြီး တော့ လေ့လာနိုင်တယ်၊ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်ရဲ့ ဆေးခန်းတို့၊ နောက်တခါ တခြား နေရာတွေပေါ့နော်၊ ဒုက္ခသည်စခန်းတို့ သွားကြည့်ချင်တဲ့ ဆန္ဒလည်းရှိတယ်။
“သို့သော်လည်း တကယ့်တကယ်မှာကျတော့ အချိန်က အရမ်းကို တိုတောင်းတဲ့ အခါကျတော့ သူ တကယ် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်ဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင်ဆိုတာ ခုထိ ကျနော်တို့ မသေချာသေးပါဘူး။
“သို့သော်လည်း သမ္မတဘုရ်ှအနေနဲ့ ထိုင်းကို ရောက်တဲ့အချိန်မှာ သေချာတာက တော့ သူ့ရဲ့ မိန့်ခွန်းတွေအားလုံးမှာ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှု အကြောင်းကို တကယ့်ကို အလေးအနက်ထားပြီး ပြောဆိုသွားမယ်၊ မြန်မာ့ အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အာဆီယံနိုင်ငံများက ဒီ့ထက်မက ပိုပြီးတော့ ဖိအားပေးမှုတွေလုပ်အောင် တိုက်တွန်းသွားမယ်၊ နောက် မြန်မာပြည်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါ သူ ထပ်လောင်းပြောကြားသွားမယ်။ ဒါတွေတော့ သေချာပါတယ်။
“နောက် တချိန်ထဲမှာပဲ ထိုင်းအစိုးရကိုလည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ မြန်မာအတိုက်အခံများရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ သူ့ရဲ့ စိတ်ပူပန်မှုတွေကိုလည်း သူဖော်ထုတ်ပြောကြားလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့ယူဆပါတယ်။”
ဟုတ်ကဲ့၊ သမ္မတဘုရ်ှက နောက် ခြောက်လလောက်ကျရင် သမ္မတသက်တမ်း ကုန်ဆုံးတော့မှာဆိုတော့ နောက်တက်လာမယ့် သမ္မတ အနေနဲ့ မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် တက်တက်ကြွကြွ ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါသလားရှင့်။ ဒီ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ထားတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ မူဝါဒတွေ ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းသွားနိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးရော ရှိနိုင်ပါသလား။
“ကျနော်တို့ နားလည်သလောက် အခု ဒီ သမ္မတလောင်းနှစ်ယောက် ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီမိုကရက်ပါတီက ဘရက် အိုဘားမားနဲ့ ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီက ဆီနေတာ မက်ကိန်း နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးက မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှိရင် အင်မတန်မှ တက်ကြွကြတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ။
“အထက်လွှတ်တော်မှာ မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ကျနော်တို့ အများကြီး ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတို့၊ အခုနောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာပစ္စည်းတွေ တင်သွင်းတာ ပိတ်ပင်ဖို့တို့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကွန်ဂရက်ကနေပြီးတော့ ဂုဏ်ထူးဆောင် ရွှေတံဆိပ်ပေးဖို့တို့ စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ၊ ကွန်ဂရက်ကနေပြီးတော့ မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကျဖို့ ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ နှစ်ယောက်စလုံးက ရှေ့တန်းကနေ
“နောက် ခုချိန်မှာလည်း သူတို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျသက်တမ်း နအဖကတိုးတာကို ဆီနေတာမက်ကိန်းအနေနဲ့ရော၊ ဆီနေတာအိုဘားမားအနေနဲ့ရော ပြင်းထန်တဲ့ကြေညာချက်တရပ်စီ ထုတ်ပြန်ပြီး တော့ နအဖစစ်အစိုးရကို ပြစ်တင် ရှုတ်ချခဲ့ကြတာပါ။
“နောက် ဆီနေတာမက်ကိန်းရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာရော၊ ဆီနေတာအိုဘားမားရဲ့ အဖွဲ့ထဲမှာရော မြန်မာ့အရေးကိစ္စ အင်မတန်မှ ထောက်ခံအားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ၀င်ရောက်ပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာပါ။
“ဆိုတော့ သမ္မတဘုရ်ှအနားယူသွားပြီး သမ္မတသစ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှာ သဘောထား ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်မထင်ပါဘူး။”
US Campaign for Burma အဖွဲ့ မူဝါဒရေးရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ဒင် ပြောပြခဲ့တာပါ။
ထိုင်းနဲ့ အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး နှစ်ပေါင်း ၁၇၅ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုဖို့အတွက် အဓိက ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သမ္မတ ဘုရှ် အခုလို ထိုင်းနိုင်ငံကို လာရောက်မှာဖြစ်ပြီး ခရီးစဉ်အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနဲ့ ဒေသတွင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိသလို အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အာရှဒေသဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့မိန့်ခွန်းတရပ် ပြောကြားဖို့ရှိတယ်လို့ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ ထိုင်းသံရုံးရဲ့ နိုင်ငံရေးရာ တာဝန်ခံ တန်နီ ဆန်ဂရက် (Tanee Sangrat) က ပြောပါတယ်။ သမ္မတဘုရ်ှရဲ့ ခရီးစဉ်ကနေ နှစ်နိုင်ငံအကြား ရင်းနှီးချစ်ကြည်မှုတွေ ပိုပြီး တည်ဆောက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့မှာ သမ္မတ ဘုရှ် ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာမှာဖြစ်သလို သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့ တရုတ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်းမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ နွေရာသီ အိုလံပစ်ပွဲတော် ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလည်း သွားရောက်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ Blog မှ ပြန်လည်ဖေါ်ပြပါသည်။
Cooperate with UN or face more pressure: US called Burma
ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာဂမ်ဘာရီနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်ဆောင်ရွက် ဒါမှမဟုတ်ရင် ဖိအားပေးမှုတွေကို ပိုမိုခံရမယ်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီကနေတဆင့် မြန်မာစစ်အစိုးရကို သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
မစ္စတာဂမ်ဘာရီနဲ့ တံခါးပိတ်ဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာ အဖွဲ့ဝင် ၁၅ နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီက မစ္စတာဂမ်ဘာရီရဲ့ နောက်လမြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်ကနေ ခိုင်မာတဲ့ရလဒ်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာဖို့ မျှော်လင့်ထားကြတယ်လို့ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Zalmay Khalilzad က သတင်းထောက်တွေကို ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မစ္စတာဂမ်ဘာရီရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ဟာ လူပေါင်း ၁၃၈၀၀၀ ကျော် သေကြပျောက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ရွေ့ဆိုင်းခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအရေး ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီ သဘောထားကွဲနေ
ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် ဘယ်လိုဖိအားပေးမလဲ ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မနေ့က ကြာသာပတေးနေ့က ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ သဘောထားတွေ ကွဲလွဲခဲ့ကြပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာဂမ်ဘာရီရဲ့ လာမယ့်သြဂုတ်လ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ကနေ ခိုင်မာတဲ့ရလဒ်တွေ ရချင်ပါတယ်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ပြောလိုက်ပြီး တကယ်လို့ မရခဲ့ရင် တင်းကျပ်တဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ပြောချင်တာကတော့ မစ္စတာဂမ်ဘာရီရဲ့ ခရီးစဉ်ကို အသုံးချပြီး စာမျက်နှာသစ်ကို ဖွင့်မလား၊ ဖိအားတွေကို ပိုပြီးရင်ဆိုင်မလားဆိုတာ ရွေးချယ်ဖို့ပါပဲလို့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ် ခါလီဇတ်က ပြောလိုက်ပါတယ်။
မစ္စတာဂမ်ဘာရီရဲ့ ခရီးအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် မြန်မာစစ်အစိုးရ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် အချိန်ကန့်သတ်ချက်ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး အသွင်ကူးပြောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွတ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ် လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။
ဗြိတိန်သံအမတ် ဂျွန်ဆော်ယာကတော့ လုံခြုံရေးကောင်စီဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေအပေါ် အာရုံမပြတ်သင့်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရအပေါ် ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ ဖိအားပေးမလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်တွေအကြား သဘောတူညီမှု ရရှိဖို့ကတော့ အတော်ခက်ပါလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကတော့ မြန်မာကိစ္စဟာ လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ ဘာမှဆောင်ရွက်စရာမလိုတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပြီး မြန်မာအပေါ် စိတ်ရှည်သည်းခံဖို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်သံအမတ်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံပြဿနာဟာ ကျယ်ပြန့်ထွေပြားတဲ့ အတွက် ဖြေရှင်းပုံတွေကလည်း ကျယ်ပြန့်ထွေပြားသင့်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မစ္စတာဂမ်ဘာရီကတော့ သူရဲံ နောက်ဆုံး မြန်မာပြည်ခရီးဟာ အောင်မြင်မှု မရကြောင်း၊ ပြဿနာတစ်ခုကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနဲ့ တွေ့ခွင့်မရတာပဲဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းဟာ “မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ” လို့ ခေါ်တဲ့ မြန်မာ့အရေးတွေကို ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ဖို့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ခေါ်ယူပြီး ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်မယ့် ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစည်းအဝေး တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေက မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီရဲ့ အခုခရီးစဉ်ကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နအဖ အကြား ဆွေးနွေးပွဲတွေ ပြန်စတင်ဖို့၊ ယုံကြည်အသိမှတ်ပြုလောက်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ဖို့၊ ကုလအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးနဲ့ ပုံမှန်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ စတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသာထင်ရှားတဲ့ ရလဒ်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာဖို့ မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။
ဒီကနေ့ ကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးဟာ အဖွဲ့ရဲ့ လေးကြိမ်မြောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ကို ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၇ မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူတွေကို အစိုးရက အင်အားသုံးနှိမ်နင်းခဲ့ အပြီးမှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစည်းဝေးပွဲမှာ Australia, China, France, India, Indonesia, Japan, Norway, Russia, Singapore, the Republic of Korea, Thailand, the United Kingdom, the United States, Vietnam, the European Community and the European Union တွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က ပြောပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ မစ္စတာ ဂျွန်ဟုမ်းစ် (John Holmes) ဟာ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းဒဏ် ခံခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုဖို့ သုံးရက်ကြာခရီးစဉ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေပါတယ်။
မနက်ဖြန် လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ မစ္စတာဂမ်ဘာရီက တင်ပြဆွေးနွေးဖို့ ရှိပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံသစ်ကို လက်မခံဖို့ ကုလသမဂ္ဂကို မြန်မာလွှတ်တော်အမတ် ၅ ဦး တိုက်တွန်း
VOA News မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
မြန်မာပြည်မှာ စစ်အစိုးရက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမူကြမ်း လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ရလဒ်များ တရားမ၀င်ဘူးလို့ ကြေညာပေးပါလို့ မြန်မာပြည်တွင်း အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးသမား တစုက ကုလသမဂ္ဂကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံက သိက္ခာမဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ပယ်ချသလိုပဲ မြန်မာပြည်က စစ်အစိုးရရဲ့ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ရလဒ်ကိုလည်း အလားတူ လက်မခံ ပယ်ချပါလို့ ကုလ သမဂ္ဂကို တိုက်တွန်းတဲ့စာတစောင် တနင်္လာနေ့မှာ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း
(Ban Ki-moon) က ရရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပေမယ့် လွှတ်တော် ခေါ်ခွင့် မရကြတဲ့အထဲက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၅ ယောက်က ဖွဲ့စည်းပုံ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကို အတုအယောင်ကြီးလို့ အဲဒီစာထဲမှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အတိုက်အခံ အင်အားစုများ၊ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများနဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ စကားဆိုပွဲ ပြုလုပ်ပါလို့ စစ်အစိုးရကို အတိုက်အခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက တိုက်တွန်းထားတဲ့ အဲဒီစာရဲ့မိတ္တူကို ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ထံကို ပေးပို့ရင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကွန်ဒိုလီဇာ ရိုက်စ် (Condoleezza Rice) နဲ့ သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရှ် (Laura Bush) တို့ထံကိုလည်း ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းရဲ့ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အီဗရာဟင်မ် ဂမ်ဘာရီ (Ibrahim Gambari) ရှေ့လထဲ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်မသွားခင်မှာ အဲဒီစာကိုလွှတ်တော်အမတ် ၅ ဦးက ရေးသားပေးပို့ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
VOA News မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါတယ်။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျနေတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ နောက်တနှစ်မပြည့်ခင် အချိန်အတွင်းမှာ လွတ်မြောက်လာနိုင်တဲ့သဘောမျိုး မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက ရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း စင်ကာပူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျော့ခ်ျယိုး (George Yeo) က အစောပိုင်းမှာ ပြောခဲ့တာဟာ နားလည်မှုလွဲပြီး ပြောခဲ့တာလို့ စင်ကာပူ နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ဒီနေ့မှာ ဖြေရှင်းချက် ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအရ နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကို ၆ နှစ်အထိ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထိန်းသိမ်းထားတာ နောက် ၆ လအတွင်းမှာ ၆နှစ် ပြည့်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းကို တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းက အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးတွေရဲ့ ညစာစားပွဲမှာ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ရှင်းပြခဲ့ကြောင်း ဂျော့ခ်ျယိုးက ပြောခဲ့တာပါ။
တကယ်ကတော့ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလကနေ နောက်ထပ် ၆ လအကြာမှာမှ ထိန်းသိမ်း ထားတဲ့သက်တမ်း ပြည့်မှာဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာဘက်က ပြန်ပြီးရှင်းပြကြောင်း စင်ကာပူ အစိုးရရဲ့ ဒီနေ့ ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်သက်တမ်းကို မြန်မာစစ်အစိုးရက ထပ်ပြီး သက်တမ်းတိုးခဲ့တဲ့ အပေါ်မှာ အင်မတန်စိတ်ပျက်မိကြောင်း အာဆီယံအဖွဲ့က အစောပိုင်းတုန်းက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံးကို စစ်အစိုးရက လွှတ်ပေးဖို့လည်း ကြေညာချက်ထဲမှာ ထပ်ပြီး တောင်းဆိုထားပါတယ်။
တခါ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေကြားမှာ လူ့အခွင့်အရေးတွေ တိုးတက်လာစေဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ အာဆီယံပဋိညာဉ်ကို မြန်မာစစ်အစိုးရက အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင် ၁၀ နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ အာဆီယံဝန်ကြီးများရဲ့ နှစ်ပတ်လည်စည်းဝေးပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက အာဆီယံပဋိညာဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံက အတည်ပြုကြောင်း ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုလို အာဆီယံပဋိညာဉ်ကို အတည်ပြုလိုက်တာဟာ အာဆီယံရဲ့ ဘုံတန်ဖိုးတွေကို အလေးအနက်ထားတယ်ဆိုတာ ပြသတာလည်းဖြစ်တယ် လို့ ၀န်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။
Aung San Suu Kyi could be freed from house arrest in about six months
မြန်မာ အဆင့်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နောက် ၆ လခန့်ကြာရင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေ လွတ်နိုင်ကြောင်း ပြောတယ်လို့ စင်္ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ အားလုံးတက်ရောက်တဲ့ ညစာစားပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းက အရိပ်အမြွက် ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေဟာ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ တနင်္လာနေ့ကစလို့ တစ်ပတ်ကြာကျင်းပမယ့် အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်သက်တမ်းကို ထပ်မံတိုးမြင့်ခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် “အလွန်အမင်း စိတ်ပျက်မိတယ်” လို့ အာဆီယံက နောက်ပိုင်းမှာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ အာဆီယံ ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် မကြုံစဖူး ထူးခြားတဲ့ ဝေဖန်အပြစ်တင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ အာဆီယံဟာ “ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်ရောက်မစွက်ဖက်ရေး ” ဆိုတဲ့မူကို လက်ကိုင်ထားပြီး ခပ်ကင်းကင်းနေတက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။
Show full post ဆက်ဖတ်ပါရန်..
ဦးဥာဏ်ဝင်းရဲ့ မှတ်ချက်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အနာဂတ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ စစ်အစိုးရရဲ့ အပြုသဘောအဆောင်ဆုံး မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သလို စစ်အစိုးရနေနဲ့ နိုင်ငံတကာက တောင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘယ်တော့လွတ်မြောက်မယ်ဆိုတာ တိကျတဲ့ အချိန်ဇယားတစ်ခု သတ်မှတ်ပေးဖို့ အနီးစပ်ဆုံးအနေအထားတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျော့ခ်ျယိုက မြန်မာနိုင်ငံ ဥပဒေအရ နိုင်ငံရေးသမားများကို ၆ နှစ်အထိ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တယ်လို့ မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောတယ်လို့ ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး “အဲဒီ ကာလဟာ နောက်လာမယ့် နှစ်ဝက်အတွင်း ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့ သူက(ဦးဥာဏ်ဝင်း) ပြောပါတယ်” လို့ လည်းဆိုပါတယ်။
ဒါဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နောက် ၆လဆိုရင် ပြန်လွတ်လာတော့မယ်လို့ ဆိုလိုပါသလားလို့ မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ ဂျော့ခ်ျယိုက “ ဒါဟာ မမှန်မကန် အနုမာနမှန်းဆချက် တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး” လို့ ပြောပါတယ်။
အဲဒီ ညစာစားပွဲနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာတော့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ပြစ်တင်ထားတဲ့ ကြေငြာချက် တစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
“မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခဲ့တဲ့အပေါ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အလွန်အမင်းစိတ်ပျက်ရမှုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်” လို့ ပါရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမြန်ဆုံးလွတ်ပေးဖို့ သူတို့ အစိုးရတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကိုလည်း ထပ်မံဖော်ပြတောင်းဆိုကြောင်း ကြေငြာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေ အားလုံးနဲ့ အဓိပါယ်ရှိတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်ဖို့၊ ဒီမိုကရေစီ စံနစ်ဆီကို ငြိမ်းချမ်းစွာ အမြန်ဆုံး ကူးပြောင်းနိုင်ဖို့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ဖို့ ကိုလည်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေက တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ နအဖ ဟာ နိုင်ငံတကာက ဖိအားတွေများပြားလာချိန်မှာ သက်သာလိုသက်သာငြား ဒီလိုလေသံလွင့်တာလို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ အခုပြောတာကလည်း တရားဝင်မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပြောတာပါလို့လည်း ယုံကြည်လောက်စရာ မရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နအဖဟာ အမြဲ ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စား လုပ်နေကြပါ။ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဆိုတာ ဘယ်တုံးကမှ လူကြီးလူကောင်းပီသသူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘိုသန်းရွှေကအစ ကျော်ဆန်း အဆုံး ပြောချင်ရာ လက်လွတ်စပယ်ပြော၊ ကိုယ်ထွေးတဲ့ တံတွေး ကိုယ်ပြန်မျိုနေသူတွေမို့ ယုံကြည်စရာ တစ်ကွက်မှမရှိပါဘူး။ နောက် ၆ လအကြာမှာ နိုင်ငံတကာက ဖိအားတွေ လျော့သွားခဲ့ရင် တစ်မျိုးပြော၊ တစ်မျိုးလုပ်ဦးမှာပါ။ ဒီတော့ Gentleman စကားမဟုတ်တဲ့ ဦးဥာဏ်ဝင်း စကားကို ယုံပြီး ကျွန်တော်တို့ တိုက်ပွဲ အရှိန်တွေ လျော့မပစ်လိုက်ပါနဲ့။ နိုင်ငံတကာက ဖိအားတွေ မလျော့သွားပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပေါ့လေ... ကျွန်တော်လည်း အကောင်းဆုံးကို မျော်လင့်ပါတယ်။ ဆယ်ခွက်တစ်ခွက်တင် ဆိုသလို အန်တီစု တကယ်ပဲ နောက် ၆ လအကြာမှာ (ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အခုချက်ခြင်း) လွတ်မြောက်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်။
(အာဆီယံရဲ့ statement ကို အောက်က link မှ download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာအကြောင်း ဖော်ပြချက်ကို ကျွန်တော် အနီရောင် ပြောင်းပေးထားပါတယ်။)
ဟိုတစ်ချိန် ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ၁၉ ဂျူလိုင် အာဇာနည်နေ့ နီးလာပြီဆိုရင် သတင်းစာ၊ ရေဒီယိုတွေမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်း မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေလာတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မိန့်ခွန်း ကောက်နုတ်ချက်တွေ ဖတ်ရ၊ မှတ်ရ၊ နားထောင်ရတယ်။ ဒီအစဉ်အလာတွေ အဖျက်စီးခံရတာ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုနီးပါး ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ရည်မှန်းပြီး ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ မိန့်ခွန်းတစ်ချို့ကို RFA ၀ိုင်းတော်သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ဆက်ခဲ့တာကို ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဒီအောက်က လင့် လေးမှာ နားထောင်ပါ။
Historical | comments (0)
အာဆီယံ (ASEAN) အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံက အတည်ပြု သဘောတူ လိုက်ပြီလို့ စင်္ကာပူနိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးက ဒီကနေ့ (18 June) ပြောပါတယ်။
အာဆီယံ ပဋိညာဉ် စာတမ်းကို ဒီမှာ download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ (၆၁) နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားတွင် ထုတ်ပြန်သော ကြေငြာချက်။
ကို နစ်နေမန်း ရဲ့ Blog မှ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က စစ်ကားတွေဆို သိပ်ကြိုက်တာ။ စစ်သားကြီးလုပ်မယ်ပေါ့။ တပ်မတော်နေ့လို့ပြောကြတဲ့ တော်လှန်ရေးနေ့ဆိုရင် အိမ်က လိုက်ပို့လို့ တော်လှန်ရေးပန်းခြံလည်း ခဏခဏ ရောက်ဖူးပါတယ်။ ညဖက်မှာ မီးရှုးမီးပန်းတွေလွတ်တာ သိပ်ကြည့်လို့ ကောင်းတာပဲ။ သူများတွေက ပြောတယ် မီးရှုးမီးပန်းထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ ပေါ်တယ်... ကြည့်...ကြည့်...ဆိုပြီး။ ကျွန်တော်တော့ တစ်ခါမှ မတွေ့ပါဘူး။ မနက်ပိုင်းမှာ တော်လှန်ရေးပန်းခြံထဲကနေ စစ်ကြောင်းတွေ စစ်သီချင်းတွေဆိုပြီး ချီတက်လာရင် ကျွန်တော့်မှာ မရိုးမရွကို ဖြစ်လို့ပေါ့။
ကျွန်တော့် အစ်ကို ၀မ်းကွဲတစ်ယောက်က စစ်တပ်ကပါ။ တပ်ကြပ်ကြီးစာရေးပေါ့။ ဗိုလ်ဖြစ်ဖို့ သင်တန်းတက်ခွင့်ရပေမယ့် တပ်ပြောင်းရမှာစိုးလို့ မဖြေဘူးဗျ။ ဒီတပ်မှာက စို့စို့ပို့ပို့လေး ရနေတာကိုး။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က သူရန်ကုန်လာတဲ့အခါတိုင်း သူ့ဗိုလ်ချုပ်တွေ အိမ်တွေကို လက်ဆောင်တွေသွားပေးတယ်။ တပ်ထဲက အကြောင်းတွေ သတင်းပို့တယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်လည်း မကြာခဏဆိုသလို လိုက်လိုက်သွားပါတယ်။ ဗိုလ်မှုးကြီးတွေ၊ ဗိုလ်ချုပ်တွေ တွေ့ရတော့ အားကျတာပေါ့။ တကယ်လည်း အားကျလောက်စရာပါပဲ။ စစ်သားတွေပီပီ ဟန်နဲ့ မာန်နဲ့ပေါ့။ ပြည်သူတွေအတွက် ရှေ့တန်းက အသေခံမယ့်၊ ပြည်သူ့အကျိုးကို အသက်နဲ့လဲပြီး ကာကွယ်မယ့် သတ္တိခဲ စစ်ဗိုလ်ကြီးတွေပေါ့။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဦးလေး (နဲနဲတော့ အမျိုးစပ်ရင် ဝေးတာပေါ့လေ) တစ်ယောက်ကလဲ အခုချိန်ဆိုရင် ဗိုလ်မှုးချုပ်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဟိုတစ်ချိန်တုံးကတော့ သူတို့တွေဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ စံပြတွေပေါ့။
၈၈ အရေးအခင်းမတိုင်မီ နှစ်တွေမှာ တပ်မတော်နဲ့ ဗကပတွေ၊ KNU တွေ တိုက်ပွဲကြီးတွေ ဖြစ်ကြလို့ ရေဒီယိုကနေ ရန်သူဘယ်နှစ်ယောက် ကျဆုံး၊ မိမိဘက်က ဘယ်လောက် ကျဆုံးပေါ့လေ ကြေငြာတဲ့အခါမှာ လူကြီးတွေက မိမိဘက်က ၁၀ ယောက်ဆိုရင် ၁၀ နဲ့ မြောက်၊ ၁၀၀ ပေါ့ကွာ။ ၁၀၀ ဆိုရင် ၁၀၀၀ ပေါ့လို့ ပြောကြပါတယ်။ ကျွန်တော်က နားမလည်ခဲ့ဘူး။ လူကြီးတွေဟာ ဘာလို့များ ကိုယ့်တပ်မတော်ကို ကိုယ် ချိုးနှိမ်ပြောရတာလဲ လို့ပေါ့။ မြန်မာ့အသံဆိုတာလည်း ညဘက်ပြည်လမ်းပေါ်က ကားမောင်းသွားရင် လူကြီးတွေပြလို့ “ပြည်သူ့အတွက် မြန်မာ့အသံ” လို့ တာဝါတိုင်ကြီးမှာ မီးရောင်စုံနဲ့ ရေးထားတာကို တခုပ်တရ ကြည့်နေကြပါ။ ဒါကြီးကလဲ လိမ်မယ်မထင်ပါဘူး။
၈၈ ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှ ကျွန်တော်ထင်တာတွေ တစ်လွဲတွေပါလားဆိုတာ သိလာရတယ်။ ည ၈ နာရီ မြန်မာ့အသံ တီးလုံးတောင် “ဗြောင်လိမ့်. ဗြောင်လိမ်.. ဗြောင်လိမ့် ဗြောင်လိမ်.. ဗြောင်လိမ် ..” လို့ ဖြစ်သွားတော့တယ်။ တကယ်လဲ ဗြောင်ကို လိမ်တာခင်ဗျ။ အင်ဖာတိုက်ပွဲတုံးကတော့ ဂျပန်ရေဒီယိုက “နိပွန်တပ်မတော်ကြီးဟာ ရန်သူဘယ်နှစ်ယောက်ကိုသုတ်သင်လိုက်ပါပြီ။ ရန်သူတွေ ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးနေရပါပြီ။ မကြာမီ အင်ဖာ ကို သိမ်းယူနိုင်တော့ပါမယ်” လို့ ကြေငြာရင် မဟာမိတ်တပ်တွေက မပြုံးပဲနဲ့ ၀ါးလုံးကွဲ ရယ်ကြသတဲ့။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ မရယ်နိုင်ဘူးဗျာ။ ခံထားရတာကိုး...။ ရင်ထဲမှာတော့ ကလိကလိ နဲ့ပေါ့လေ။ အခုလိုမျိုး ကိုယ်ပြောချင်တာလေးတွေ ပြောလို့ရတဲ့ နေရာကလဲ မရှိသေးဘူး မဟုတ်လား။
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီ။ ပြည်သူတွေ၊ ကျောင်းသားတွေကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်နေပြီ။ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ ကြုံတွေ့ရ၊ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ စက်ရုံတွေကို စစ်ကားနဲ့ အရင်လာဖောက်ပြီး ပစ္စည်းတွေသယ်ထုတ်တယ်။ နောက် တံခါးဖွင့်ထားခဲ့ပြီး လူတွေလာသယ်တဲ့အခါကြတော့ သေနတ်နဲ့ပစ်တယ်။ စက်ရုံကို ဖျက်စီးလုယက်သူတွေပါလို့ ပြောတယ်။ တစ်ချို့လည်း တကယ် လုယက် ဖျက်ဆီးသူတွေ ရှိကြပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ တရားဥပဒေ မဲ့သွားပြီဆိုတော့ ဒါမျိုးတွေ ရှိလာမှာပဲ။ အဲဒါကို ကျောင်းသားတွေကလဲ ထိန်းကြတယ်။ ရပ်ကွက်ထဲမှာလည်း ကိုယ့်လမ်းကိုယ် အလုံပိတ်ပြီး နေကြတယ်။ လူထုက စစ်တပ်ကို အရမ်းမုန်းတီးသွားတဲ့ အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် စစ်ထောက်လှမ်းရေးလို့ ယူဆရင် ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်ကွပ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် နောက်မှ စဉ်းစားမိတာတော့ သာမန်လူထုက လူသတ်ရလောက်အောင် မရိုင်းစိုင်း၊ မကြမ်းကြုတ်သွားပါဘူး။ ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာအောင် စစ်ထောက်လှမ်းရေးကပဲ အကွက်ကျကျ စီစဉ်ခဲ့တာလို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ ဒါမှ တိုင်းပြည်တော့ ပျက်နေပါပြီဆိုပြီး စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းဖို့ လမ်းပွင့်မှာ မဟုတ်လား။
အဲဒီကနေ တောက်လျောက် ကျွန်တော် စစ်တပ်ကို ရွံ့ရှာမုန်းတီးသွားခဲ့တာ..။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားတွေ ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံရတယ်။ မသေမရှင်တွေရော အသေတွေရော ထရပ်ကားပေါ်ပစ်တင် မီးရှို့ပစ်တာ ကျွန်တော်တို့သိတယ်။ လုံထိန်းတွေ ရက်စက်ယုတ်မာတာ ကျွန်တော်တို့ သိတယ်။ လက်နက်ဆိုလို့ အပ်တိုတစ်ချောင်းမရှိတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ၊ ပြည်သူတွေကို ဘယ်လို သတ္တိနဲ့များ ရက်ရက်စက်စက် သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ရဲတာလဲ။ အာဂ သတ္တိရှင်တွေပါပဲ။ ဘိုချုပ်ကြီးစောမောင်က ပြည်ပသတင်းထောက်တွေကို သူတို့ တကယ်မပစ်ပါဘူး။ တကယ်ပစ်ရင် တပ်ခွဲတစ်ခွဲစာရဲ့ ပစ်အားဟာဘယ်လောက်ရှိသလဲ ဆိုတာ လက်တွေ့ကြည့်ပါဆိုပြီးတောင် ပစ်ပြလိုက်သေးတယ်။
အရေးအခင်းပြီးတဲ့အခါကြမှ ကျွန်တော် သမိုင်းမှာ အကောင်းတွေချည်းပဲ သင်ခဲ့ရတဲ့ တော်လှန်ရေးကောင်စီနဲ့ ဘိုနေ၀င်း အကြောင်းကို ကျောင်းစာအုပ်အပြင်က လေ့လာမိတယ်။ ဘိုနေ၀င်းရဲ့ ရက်စက်မှုကလဲ ကမ်းကုန်အောင်ပါပဲလား...။ ကျောင်းဝင်းထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေကို ရက်ရက်စက်စက် သေနတ်နဲ့ပစ်တယ်။ ဒါနဲ့တောင် အရှက်မရှိ “ဒါးကိုဒါးချင်း၊ လှံကိုလှံချင်း” လို့ ပြောသေးတယ်။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး သန္ဓေတည်ရာ၊ မြန့်မာ့လွတ်လပ်ရေး ခေါင်းဆောင်တွေ မွေးဖွားရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦးကို ဗုံးခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။ ဘယ်လောက် မိုက်ရိုင်းလိုက်သလဲဆိုတာ...။ ကမ္ဘာကြေရင်တောင် ဥဒါန်းမကြေနိုင်ဘူး။ ဘိုနေ၀င်းရဲ့ နောက်လိုက် ဘိုတကာ့ဘို တွေကလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲလား။ မြန်မာပြည်ရဲ့ တပ်မတော်ဟာ ဘာများဖြစ်သွားတာလဲ။ ဘာတွေများ မှားယွင်းသွားခဲ့တာလဲ...။
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး မှာ တစ်တိုင်းပြည်လုံးက ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ကြတဲ့ ဘုရားသားတော် သံဃာတော်တွေ ကိုတောင် စော်ကားရဲတဲ့အထိ၊ သတ်ဖြတ်ရဲတဲ့အထိ စစ်တပ်ဟာ အသိဥာဏ်မဲ့လာတယ်။ ဘိုသန်းရွှေရဲ့ အာဏာတည်မြဲဖို့ အတွက် သံဃာကိုတောင် မမြင်နိုင်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တပ်မတော်ဟာ ဒီလောက်တောင် ဆိုးဝါးနိမ့်ကျနေပြီလား။ အမိန့်ပေးရင် လူဆိုး လူကောင်း မခွဲခြားနိုင်ပဲ ထိုးကိုက်တဲ့ ခွေးတွေလိုဖြစ်နေပြီလား။ ကျွန်တော်တော့ ဒီလို မထင်မိပါဘူး။
တပ်မတော်... ပြည်သူ့တပ်မတော်ဆိုတာ ပြည်သူထဲက ပေါက်ဖွားလာတာပါ။ ဝေးဝေးမကြည့်ပါနဲ့ ကျွန်တော့် အမျိုးထဲမှာတောင် စစ်သားတွေ၊ စစ်ဗိုလ်တွေ၊ ဗိုလ်မှုးကြီးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကို ပြသလဲဆိုတော့ တပ်မတော်ဟာ ပြည်သူထဲက ပေါက်ဖွားလာတာပါ ဆိုတာသေချာပါတယ်။ ဒါဖြင့်ရင် ဘာကြောင့် ဒီတပ်မတော်ဟာ ပြည်သူ့ဘက်က မရပ်တည်နိုင်ရတာလဲ။ ကျွန်တော့် အထင် ပြောရရင်တော့ ကြောက်လို့ပါ။ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ စစ်သားဟာဘာကို ကြောက်တာလဲ။ အဲဒီလောက် ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ဓါတ်အင်အား မရှိလို့ပါ။ ကျွန်တော် အားကျခဲ့ဘူးတဲ့ ကျွန်တော့အစ်ကိုရဲ့ ဆရာ ဗိုလ်မှုးကြီးတွေ၊ ဗိုလ်ချုပ်တွေ သူတို့တွေအားလုံး တကယ်တော့ ကြောက်နေကြတာပါ။ သတ္တိမရှိတာပါ။ စုဖုယားလတ်က ကင်းဝန်မင်းကြီးကို “ထမီနဲ့ ကျောက်ပျင်” ပို့ခိုင်းသလို ဒီ ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုလည်း ထမီနဲ့ ကျောက်ပျင် ပို့ခိုင်းမယ်ဆိုရင် လွန်မယ်မထင်ပါဘူး။ မတရားတာကို သိတယ်၊ မမှန်တာကိုသိတယ်၊ သို့သော်လည်း တွန်းလှန်ဖို့ သတ္တိမရှိဘူး။ ဘာကြောင့် မတရားတာကိုသိတယ် မမှန်တာကို သိတယ်လို့ ပြောနိုင်သလဲဆိုတော့ ဒီ အာဏာရူး ဘိုသန်းရွှေအစိုးရ တရားတာလုပ်သလား မတရားတာလုပ်သလား၊ ကောင်းတာလုပ်သလား မကောင်းတာလုပ်သလားဆိုတာ ဆယ့်ငါးနှစ်သားဦးနှောက်လောက် တွေးတက်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗိုလ်မှုးတွေ၊ ဗိုလ်ချုပ်တွေ ဆယ့်ငါးနှစ်သား ဦးနှောက်ထက်တော့ မကပါဘူး။ ပညာတက်တွေပဲ တွေးတက်ပါတယ်။ သတ္တိမရှိတဲ့အတွက်တော့ သူတို့ကို သနားမိပါတယ်။ နောင်လာမယ့် သမိုင်းမှာ စစ်သားဆိုတဲ့ နာမည်ခံပြီး သတ္တိမရှိလို့ သွေးကြောင်လို့ တိုင်းပြည်အတွက် မစွန့်စားရဲတဲ့ ဘိုချုပ်တွေအဖြစ် သမိုင်းကြောင်း မလှမယ့် အတွက်ပါ။ ကျွန်တော်အခု စစ်တပ်ကို မမုန်းတော့ပါဘူး။ သနားမိပါတယ်...။
အဲဒီတော့ အထက်က ဗိုလ်ချုပ်တွေက သတ္တိမရှိတော့ဘူး၊ တိုင်းပြည်အတွက် မစွန့်လွတ်ရဲ တော့ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်အတွက် တကယ်စေတနာရှိတဲ့ တကယ်အမျော်အမြင်ရှိတဲ့ မျိုးဆက်သစ် တပ်မတော်သားတွေကို စည်းရုံးရမယ်။ မျိုးဆက်သစ် စစ်ဗိုလ်တွေကို စည်းရုံးရမယ်။ သူတို့နောက်မှာ ပြည်သူလူထုရှိတယ်။ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ သိလာအောင် လုပ်ရမယ်။ အောက်ခြေတပ်မတော်သား အများစုဟာ ပြည်သူတွေထက်တောင် ဆင်းရဲပင်ပန်းကြပါတယ်။ စစ်တပ်ရဲ့ လူညွန့်တုံးအောင် ပုံသွင်းထားတဲ့ တစ်သွေးတစ်သံတစ်မိန့် ကြောင့်သာ ကြောက်နေကြတာပါ။ သူတို့တစ်တွေလည်း ကျွန်တော်တို့လိုပဲ အပြောင်းအလဲကို လိုလားကြပါတယ်။ တိုင်းပြည်တိုးတက်မှာကို လိုလားကြပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေရဲ့ ဘက်မှာ တစ်တိုင်းပြည်လုံးရှိတယ်။ အာဏာရူး ဘိုသန်းရွှေရဲ့ လက်တစ်ဆုပ်စာ စစ်ဘိုချုပ်တစ်စု ကောင်းစားဖို့ကိုပဲ ပြည်သူတွေရဲ့ အမုန်းတီးခံပြီး ကျွန်မခံတော့ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး သူတို့တွေရင်ထဲ ရောက်အောင် စည်းရုံးနိုင်ရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ တိုင်းပြည်ကို ကျွန်ဇာတ်သွင်းနေတဲ့ စစ်အာဏာရူး ဘိုသန်းရွှေနဲ့ အပေါင်းအပါတစ်စုကို ထိုက်တန်တဲ့ အပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
Rise from those waters likeacall
All, all, dispel the darkness and
This is 'Test' page.
“ဒီ လူသတ်ကောင်၊ စစ်အာဏာရူး တွေရဲ့ လည်ကို အဖေ့လက်ထဲက ဂျပန်ဓါးနဲ့သာ တအားခုတ်လှည့်ပါတော့ အဖေ...။”*
(ဒီနောက်ဆုံး စာသားလေးဟာ ၈၈ တုန်းက ကျွန်တော် ဝေခဲ့ရတဲ့ စာတွေကြားထဲမှာ ပါလာတဲ့ ကဗျာလေး ထဲကပါ။ ကဗျာလေးက စာမျက်နှာ သုံးမျက်နှာစာလောက် ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် သိပ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ။ အခုတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ အဲဒီ စာကြောင်းလေးပဲ မှတ်မိပါတော့တယ်။ သိတဲ့သူတွေရှိရင်လည်း ပြန်လည် ဝေမျှပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။)
မနေ့ က တနင်္လာနေ့မနက် ၈ နာရီခန့် မှာ ကျောက်ကြီး ကနေ ရန်ကုန်ကို ထွက်ခွာလာတဲ့ မီနီဘတ်စ် တစ်စီးပေါ်မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မြန်မာသတင်းစာများ မှာ ဖေါ်ပြပါတယ်။ အဆိုပါ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အမျိုးသားတစ်ဦးသေဆုံးပြီး အခြားအမျိုးသား ခရီးသည်တစ်ဦးလည်း ဒါဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
စစ်အစိုးရကတော့ ထုံးစံအတိုင်း အတိုက်အခံအဖွဲ့ အစည်းများကို လက်ညိုးထိုး စွပ်စွဲထားပါတယ်။ ဒီလအစောပိုင်းမှာ နအဖ လက်ကိုင်တုတ် ကြံ့ဖွတ် ရုံးမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ ပြီး လုံခြုံရေးတွေ တင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားက ဒီဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။
ကြံ့ဖွတ်ရုံး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဟာ သူတို့ လက်ချက်ပါလို့စွမ်းအားမြှင့်စစ်သည်တော်များ အဖွဲ့ က ၀န်ခံခဲ့တာကလွဲလို့ကျန်ဗုံးပေါက်ကွဲမှုအတော်များများမှာ နအဖဟာ အတိုက်အခံအင်အားစု တွေကို လက်ညှိုးထိုးတာကလွဲလို့တရားခံတိတိကျကျ မဖော်ထုတ်ပေးခဲ့ပါဘူး။
၂၀၀၅ မေလမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံ့သမိုင်းမှာ အကြီးကျယ်ဆုံး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုမှာလည်း တရားခံ တိတိပပ မဖေါ်ထုတ်ပေးခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီတုန်းက ဒဂုံစင်တာ၊ Junction 8 နဲ့ပုဇွန်တောင်က ကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာန တွေမှာ ဗုံးသုံးလုံးဆင့်ပေါက်ခဲ့ပြီး ပြည်သူ ၂၀ နီးပါး သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ အများစုကတော့ ဒီဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေ (အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် အများစု) မှာ စစ်အစိုးရ ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။
မမေ့နိုင်တဲ့ ၁၉ ဂျူလိုင် အာဇာနည်နေ့လည်းနီးကပ်လာပါပြီ။ ကျောင်းသားပြည်သူ ထောင်ပေါင်းများစွာ အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ အနှစ် ၂၀ ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့လည်း ကျရောက်ပါတော့မယ်။ စက်တင်ဘာ ရွှေရောင်တော်လှန်ရေးရဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့ဟာလည်း မဝေးတော့ပါဘူး။ ဒီအရေးတော်ပုံတွေရဲ့ အတိတ်သမိုင်းက စစ်အာဏာရှင်တွေကို အမြဲခြောက်လှန့် နေမှာပါ။ ဒီနေ့ ဒီရက်တွေနီးရင် နအဖဟာ ရင်တမမ ဖင်တကြွကြွနဲ့ ကြောက်လန့် နေမြဲပါ။ ဒါကြောင့် တိုင်းပြည်လူထုကို အာရုံလွဲအောင် မငြိမ်မသက် ဖြစ်အောင်၊ အထိတ်တလန့် ဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေတယ်လို့ ပဲ ထင်ပါတယ်။
Al Jazeera.net, July 14, 2008
ဆူဒန်နိုင်ငံ ဒါဖာမှာ စစ်ရာဇ၀တ်မှုတွေ ကျူးလွန်တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ ဆူဒန်နိုင်ငံ သမ္မတ Omar al-Bashir ကို ဖမ်းဆီးဖို့ အတွက် နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ခုံရုံး International Criminal Court ရဲ့ ရှေ့ နေတွေက တောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ကြေငြာချက် တစ်ခုမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဆူဒန်သမ္မတ al-Bashir ဟာ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု သုံးစုကို မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာ စီစဉ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ကြေငြာချက်မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
အခုလို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချက်ဟာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ကို ဖမ်းဆီးဖို့ICC မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် တောင်းဆိုမှုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
al-Bashir ဟာ မျိုးဖြုတ်သက်ဖြတ်မှု ၁၀ ကြိမ်၊ လူသားဖြစ်တည်မှုကို ဆန့် ကျင်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေနဲ့ ၊ စစ်ရာဇ၀တ်မှုတွေကို ကျူးလွန်ခဲ့ရာမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ရလောက်တဲ့ အကြောင်းအချက်တွေ ရှိတယ်လို့တရားလိုရှေ့ နေတွေက ကြေငြာချက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ICC ကတော့ ရှေ့ နေတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ကို သုံးသပ်ပြီး လက်ခံလောက်တဲ့ အကြောင်းအချက်တွေ ရှိသလားဆိုတာနဲ့ဒီကျူးလွန်မှုတွေဟာ ICC ရဲ့တရားစီရင်နိုင်ခွင့် အတွင်းမှာ ရှိသလားဆိုတာ စုံစမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ပေးသင့် မပေးသင့် ကို တရားသူကြီးများက ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပြီး အဲဒါဟာ လပေါင်းအတော်ကြာနိုင်တယ်လို့ လည်း ဆိုပါတယ်။
ကုလအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းကတော့ “ကျွန်တော့အနေနဲ့အလွန်ပဲ စိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ တရားဥပဒေကို ရှောင်လွှဲလို့မရပါဘူး” လို့ပြောပါတယ်။
al-Bashir ကို ဖမ်းဆီးလိုက်ရင် ဆူဒန်နိုင်ငံတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တင်းမာမှုတွေကို မီးလောင်ရာလေပင့် ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်း ရှိပါတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီသတင်း အပြည့်အစုံကို Al Jazeera.net မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဆူဒန်က ဘာရှားပြီးရင်တော့ ဘားမားက ဘိုရွှေ အလှည့်ဖြစ်မလားဆိုတာ....။
ASEAN Ready to Increase Cooperation with the UN Systems in Assisting Victims of Cyclone Nargis
ASEAN Secretariat, 10 July 2008
NEW YORK – ASEAN remains ready to further cooperate with the UN and its agencies such as the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in the ongoing humanitarian efforts for the victims of Cyclone Nargis in Myanmar, said the ASEAN Secretary-General, Dr Surin Pitsuwan in New York today.
After talks with Mr John Holmes, the Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Dr Surin confirmed that Mr Holmes would be attending the release of the Post-Nargis Joint Assessment Report in Singapore on 21 July 2008.
Dr Surin said, “The UN leadership appreciates the support, cooperation and leadership that ASEAN has shown in this issue.”
He added that the UN Secretary-General is also committed to the ASEAN-UN Summit to be held in Bangkok later this year.
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ် ခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ စုမာတြား ကျွန်းတွေ မြေအောက်ရေတွေမှာ Arsenic (စိန်အဆိပ်) ပါဝင်နိုင်မှု အန္တရာယ်နဲ့မြင့်မြင့်မားမား ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လေ့လာမှုတစ်ခုအရ သိရပါတယ်။ စိန်အဆိပ်ဟာ ကင်ဆာရောဂါနဲ့အခြားရောဂါဝေဒနာတွေကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။
“စိုးရိမ်ပူပန်စရာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့သုတေသနအချက်အလက်တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် စိန်အဆိပ်ပါဝင်မှု အန္တရာယ်ကို တွေ့ နိုင်ပါတယ်” လို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology က Senior scientist Michael Berg က ပြောပါတယ်။
သောက်သုံးရေထဲမှာ စိန်အဆိပ်ပါဝင်နေမှုဟာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုလို့ ဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်း ၇၀ ကျော်က ပြည်သူ ၁၃၇ သန်းဟာ ဒီန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒီမှာ လူထောင်ပေါင်း များစွာဟာ အဆုပ်ကင်ဆာ၊ ဆီးအိမ်ကင်ဆာနဲ့အရေပြားကင်ဆာ ရောဂါတွေနဲ့သေဆုံးရမယ့် အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
စိန်အဆိပ်ဟာ မြေအောက်ရေခိုအောင်းရာ ရေအရင်းအမြစ်တွေဆီကို အနံ့ အရသာမဲ့စွာ ၀င်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ လယ်ယာနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေဆီကလည်း ၀င်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။
စိန်အဆိပ်ကို ပမာဏများများသုံးစွဲမိရင် သေစေနိုင်တဲ့ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ပမာဏ နည်းနည်းကလေးကတောင် ကင်ဆာရောဂါ၊ အရေပြားဆိုင်ရာရောဂါတွေနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာ စတာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
မုန်တိုင်ဒဏ်ခံ မြန်မာပြည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရဲ့မြေအောက်ရေထဲမှာ စိန်အဆိပ်ပါဝင်မှု အန္တရာယ် မြင့်မားမှုဟာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့Guidelines ထက်ကို ကျော်လွန်နေပြီလို့Berg နဲ့အခြားပညာရှင်တွေက ကောက်ချက်ချကြပါတယ်။
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေရဲ့ Blog မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ မင်းကြီး(သရေခေတ္တရာ)ရဲ့ “ပဲ့တင်သံ” ဆောင်းပါးကို ဖတ်မိပြီး ကျွန်တော်လည်း သဘောကျမိလို့ဆက်ပြီးတွေးဖြစ်ပါတယ်။ မင်းကြီး(သရေခေတ္တရာ) သုံးသပ်သလိုပါပဲ NLD ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဟာ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်း ညံ့ဖြင်းတာကို တွေ့ ရပါတယ်။ အလုပ်မဖြစ်တဲ့ ကြေညာချက်တွေပဲ တွင်တွင်ထုတ်နေပြီး ကလေးမုန့် တောင်းသလို တစာစာပူစာနေတာပဲတွေ့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နာဂစ် ကိစ္စမှာ နိုင်ငံရေးအရ အမြတ်ထုတ်နိုင်မယ့် အနေအထားကောင်းတွေ ရခဲ့ပေမယ့်လည်း ထိထိရောက်ရောက် အသုံးမချနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အန်တီစု ဘာမှမလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ အချိန်မှာ လက်ရှိ ဒီချုပ် ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားလောက်စရာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဘာတစ်ခုမှ လုပ်ပြနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော့အမြင်ပြောရရင်တော့ လက်ရှိ NLD ဟာ လေးစားလောက်စရာ တိကျတဲ့ နည်းဗျူဟာ မရှိဘူး။ စစ်အစိုးရလုပ်သမျှကို ကြေညာချက်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ထုတ်ရင်းနဲ့ပဲ ပုဆိုးခြုံထဲက လက်သီးပြသလို ဖြစ်နေတယ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က ရထားနဲ့ ခရီးဝေးသွားတဲ့အခါ ရထားဘေးနား လိုက်ပြီး ခလေးတွေ ပိုက်ဆံတောင်း၊ မုန့် တောင်းသလိုပဲ၊ ရထားကြီးကတော့ သူတို့ ကို ထားခဲ့ပြီး ဆက်သွားတာပါပဲ။ အခုလည်း NLD နဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် အာဏာရူး ဘိုသန်းရွှေရဲ့နအဖမှာ တိကျတဲ့ ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်။ ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော၊ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော ဆိုတဲ့ Road map နဲ့ခရီးဆက်နေတယ်။ အခုနှစ် ၂၀၀၈ အကုန်မှာ ပါတီတွေ မှတ်ပုံတင်ရမယ်။ ၂၀၁၀ မှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်။ အဲဒီမှာ ကြံ့ဖွတ်အဖွဲ့ ကို ပါတီအသွင်ပြောင်းမယ်။ လူဆိုးလူမိုက် ကလေကချေတွေနဲ့ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ ပြည်သူ့ စွမ်းအားရှင်များက ပြည်သူလူထုကို ခြိမ်းခြောက်မယ်။ စသည်ဖြင့် စသည်ဖြင့် ရေတို ရေရှည် မဟာဗျူဟာတွေ၊ နည်းဗျူဟာတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့NLD ကရော၊ ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ။ ဘယ်လို ပုံစံမျိုးနဲ့စစ်အစိုးရကို ရင်ဆိုင်မှာလဲ။ ဒီနှစ်အကုန်မှာ ပါတီမှတ်ပုံတင်မှာလား၊ ဒါဆိုရင် နအဖရဲ့road map ကိုလက်ခံလိုက်သလို ဖြစ်မသွားဘူးလား။ မှတ်ပုံမတင်ရင်ကော ပါတီအဖြစ်က ဖျက်သိမ်းခံရမလား။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးတဲ့ ရုရှား သူရဲကောင်းပုံပြင် တွေမှာ သူရဲကောင်းဟာ လမ်းဆုံလမ်းခွရောက်နေပါပြီ။ ဘယ်ဘက်လမ်းသွားရင် သေမယ်။ ညာဖက်လမ်းသွားရင် သင့်ရဲ့ ဦးခေါင်း အဆုံးရှုံးခံရမယ် ဆိုတာလို ဖြစ်နေပြီ။
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ဒီအချိန်မှာ အကောင်းဆုံးစဉ်းစားပြီး ခြေမြန်လက်မြန် လှုပ်ရှားရမယ့် အချိန်ရောက်နေပြီထင်ပါတယ်။ ဒီလိုပုံစံပဲ ကြေညာချင်တွေ ထုတ်ရင်း နအဖ ရဲ့နည်းဗျူဟာထဲမှာ လည်ဆင်းပေးခံမလား။ စွန့် စားမှုလုပ်မလား၊ ဆုံးဖြတ်ဖို့အချိန်သင့်ပါပြီ။ အားလုံးသော ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားများကလည်း ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားကြ၊ အကြံကောင်း ဥာဏ်ကောင်းများပေးကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။
ဒုက္ခရောက်သူများကို ကူညီပေးနေတဲ့ အဖွဲ့ ဖြစ်တဲ့ UK အခြေစိုက် Shelterbox အဖွဲ့ က နာဂစ် ဒုက္ခသည်များအတွက် လှူဒါန်းထားထဲ့ တဲအိမ်တွေရဲ့ ပုံတွေကို ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ တဲတွေမှာ မီးဖို၊ အိုးခွက်တွေနဲ့အခင်းတွေပါရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လပွတ္တာမှာ တဲအိမ် ၇၀၀ ခန့်နဲ့ဟိုင်းကြီးကျွန်းပေါ်မှာ ၃၀၀ ရှိတယ်လို့ Shelterbox အဖွဲ့ က Mark Pearson က ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး စိတ်ကောင်းဖြစ်မိသလို မြန်မာတွေရဲ့ယောနိသောမနသီကာရ ကိုလည်းမြင်မိပါတယ်။ ဈေးဆိုင်ရှင် မျက်နှာကိုကြည့်ပါလားဗျာ။ ပြုံးနေတာပါပဲ။ ခြင်းခတ်တဲ့ ကလေးတွေလဲ ပျော်နှိုင်နေကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတခဏလေး နောက်ကွယ်ကကြေကွဲ နာကျင်ရမှုတွေကို ဘယ်သူမြင်နိုင်မလဲ။ တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ရတနာလေးတွေ အနာဂတ်မဲ့သွားတာတွေကို ဘယ်လိုပြန်ကုစားကြမလဲ။ အမျှော်အမြင်ကင်းမဲ့တဲ့၊ အာဏာရူးနေတဲ့ စစ်အစိုးရစစ်ဖိနပ်အောက်မှာ ဘယ်လောက်အထိ မြန်မာပြည်ဟာ မဆုံးနိုင်တဲ့ နာကျင်မှုတွေကို ခံစားရဦးမှာလဲ။ ဒါတွေအဆုံးသတ်ဖို့အချိန်သင့်ပါပြီ။ အာလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီကြိုးစားကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
မရေးဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့ရဲ. Blog လေးကို ဒီနေ့ပြန်အသက်သွင်းပါတယ်။ အစကတော့ ကျွန်တော့် စိတ်ကူးလေးတွေ၊ တွေးမိမြင်မိတာလေးတွေ၊ ဖတ်မိမှတ်မိတာလေးတွေကို ပြန်ဝေမျှဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။ လူငယ်တွေအချင်းချင်း အတွေးအမြင်လေးတွေ ဖလှယ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။ အခုတော့ ဒီ Blog လေးမှာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးချစ်တဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံ့အရေးတွေကို တင်ဖို့ဖြစ်လာပါပြီ။ လူငယ်တွေ ကိုယ်တက်နိုင်တဲ့ဘက်က Blog တွေရေးပြီး နိုင်ငံ့အရေးအတွက် ရတက်မအေးနိုင်ပဲ တတပ်တအား ပါဝင်လာကြတာတွေတွေ့ရတော့ ကျွန်တော်လဲ ကျွန်တော့ရဲ့အောင့်လုံးတွေကို မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ဖွင့်ထုတ်မိတာပါပဲ။ (ဆရာကိုတာကတော့ အောင့်လုံးမရှိပါဘူးတဲ့ အားလို့ ယားလို့စာရေးတာပါတဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ မအားတဲ့ကြားက ယားလို့ ရေးတာပါ။) နိုင်ငံရေးဆိုတာ နိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရေးပါ။ ကိုယ့်နိုင်ငံအရေးကို ပြည်သူတွေမပါရဘူးဆိုတဲ့ စစ်အာဏာရုး ဘိုသန်းရွှေနဲ့အပေါင်းအပါတွေရဲ့စစ်ဖိနပ်အောက်က မြန်မာပြည် အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့ ၊ မမှန်တာတွေပဲ ရွေးပြောတက်တဲ့ စစ်အာဏာရူးတွေရဲ့မီဒီယာအမှောင်ထုကို ထွင်းဖောက်နိုင်ဖို့တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ပါဝင်ခဲ့ပါပြီ။ ၈၈ အရေးအခင်းကို မျက်မြင်ကြုံတွေ့ ခဲ့ရ၊ ကိုယ်တိုင်ပါဝင် ခဲ့သူတစ်ယောက်၊ ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်တွေကို မျက်နှာပြောင်တိုက် ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသူ ပြည်သူတွေထဲက တစ်ယောက်အနေနဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စံနစ်ကို ကျဆုံးသည်အထိ တိုက်ထုတ်သွားဖို့ ၊ အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ် ၀ိုင်းဝန်းကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်။